डा. रुइतले नेपालको गौरवपूर्ण परम्परा सम्झाउनुभयो : प्रधानमन्त्री ओली – Rajdhani Daily
डा. रुइतले नेपालको गौरवपूर्ण परम्परा सम्झाउनुभयो : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा.सन्दुक रुइतले नेपालको गौरवपूर्ण परम्परालाई सम्झाएको बताएका छन् । तिलगंगाआँखा प्रतिष्ठानको २५ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्वान पूर्खाहरुको देश नेपालमा सन्दुकले आँखा उपचारको क्षेत्रमा चमत्कारिक काम गरेको बताए । ‘डा.रुइतले गौरवपूर्ण इतिहास सम्झाउनु भएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आँखा उपचारको लागि विश्वको अग्रणी संस्था स्थापना गरेर धेरैलाईनयाँ संसार देखाउन उहाँ सफल हुनुभएको छ । त्यस कारण उहाँलाई बधाइ र संस्थालाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना ।’
डा.रुइतको प्रयासमाअन्धोपनका धेरै बिरामीहरुले नयाँउज्यालो संसार देख्न पाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । तिलगंगा आँखा अस्पतालको प्रेरणाबाट धेरै ले सेवामुखी अस्पताल खोल्ने प्रेरणा लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थापनाको २५ बर्ष मै धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रुइत र अस्पतालको प्रशंशा गरेका छन् । ‘तपाईंहरुका प्रयास र सेवा अनुकरणीय छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘सरकारको तर्फबाट तपाईंहरुलाई अनुसन्धान, तालिम र उपचारमा यथेष्ट सहयोग हुनेछ ।’